ဧပြီ ၂၀၁၅ နီပေါ ငလျင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် ၂၀၁၅ ဧပြီ ၂၅ တွင် ဖြစ်ပွားသော နီပေါငလျင် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ မေ ၁၂ တွင် ဖြစ်ပွားသော ငလျင်ကြီး အတွက် မေ ၂၀၁၅ နီပေါ ငလျင် ကို ကြည့်ပါ။
၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၅ (၂၀၁၅-၀၄-၂၅)
၁၅.၀ ကီလိုမီတာ (၉ မိုင်)
၆.၆ Mw၊ ဧပြီ ၂၅၊ ၀၆:၄၅ နာရီ
၆.၇ Mw၊ ဧပြီ ၂၆၊ ၀၇:၀၉ နာရီ
နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ = ၁၅၀ (၂၀၁၅ မေ ၁၂ အထိ)
၈,၂၅၉ သေဆုံး (တရားဝင်သတင်း) ၁၉,၀၀၉ ဒဏ်ရာရ (တရားဝင်သတင်း)
ဧပြီ ၂၀၁၅ နီပေါငလျင် (ဂေါ်ခါငလျင်) သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၅ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နီပေါစံတော်ချိန် ၁၁:၅၆ နာရီ (၆:၁၁:၂၆ UTC) တွင် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သော ပြင်းအား ၇.၈ Mw ရှိ ငလျင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငလျင်ဗဟိုချက်မှာ နီပေါနိုင်ငံ၊ လမ်ဂျန် ခရိုင် အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၃၄ km (၂၁ mi) အကွာ၊ အနက် ၁၅ km (၉.၃ mi) ကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၃၄ ခုနှစ် နီပေါ-ဗီဟာ ငလျင်နောက်ပိုင်း နီပေါနိုင်ငံကို ထိခိုက်စေသည့် အင်အားအပြင်းထန်ဆုံး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသော အိန္ဒိယ၊ တရုတ် နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ဒေသများတွင် သေဆုံးမှုများရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ငလျင်ကြောင့် ဧဝရတ်တောင်တွင် ဆီးနှင်းရေခဲထုများ တစ်ဟုန်ထိုး ပြိုကျစေခဲ့ကာ အနည်းဆုံး ၁၉ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ လူသေဆုံးမှုမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧဝရတ်တောင် ဆီးနှင်းပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးမှုထက် ကျော်လွန်ခဲ့ကာ ဧဝရတ်တောင်တွင် လူအများဆုံးသေဆုံးစေခဲ့သော နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငလျင်ကြောင့် နီပေါနိုင်ငံနှင့် တိဗက်နယ်စပ်ရှိ လန်တန်တောင်ကြားဒေသတွင်လည်း ဆီးနှင်းရေခဲထုကြီးပြိုကျခဲ့ပြီး လူ ၂၅၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
နီပေါနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ရွာလုံးကျွတ်ပျက်စီးမှုများကြောင့် လူပေါင်းသောင်းချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ခတ္တမန္ဒူတောင်ကြားဒေသရှိ ခတ္တမန္ဒူ ဒါဘာစကွဲ၏ အချို့နေရာများ၊ ပါတန်ဒါဘာစကွဲနှင့် ဘက်တပါ ဒါဘာစကွဲ အပါအဝင် ရာစုနှစ်များစွာ သက်တမ်းရှိသော ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများ လည်း ပျက်စီးခဲ့သည်။ ဘူမိရူပပညာရှင်များနှင့် အခြားပညာရှင်များက နီပေါနိုင်ငံ၏ ပထဝီဝင်၊ လူနေထိုင်မှုနှင့် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မှုများကြောင့် ငလျင်ဒဏ်ကို ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းနိုင်ကြောင်း လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက သတိပေးပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ဧပြီ ၂၆ ရက် နီပေါစံတော်ချိန် ၁၂:၅၄:၀၈ နာရီတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ပြင်းအား ၆.၇ ရှိ ငလျင်တစ်ခု အပါအဝင် နီပေါတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နောက်ဆက်တွဲငလျင်များ ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အတွင်း ဆက်တိုက် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ ငလျင်ကြောင့် မြေပြိုကျမှုအန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိနေသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက် နီပေါစံတော်ချိန် ၁၂:၃၅ အချိန်တွင် ပြင်းအား ၇.၃ Mw ရှိ ဒုတိယမြောက် အကြီးစားငလျင်တစ်ခု ထပ်မံလှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ ငလျင်ဗဟိုချက်မှာ ခတ္တမန္ဒူမြို့တော်နှင့် ဧဝရတ်တောင်တို့အကြားရှိ တရုတ်နယ်စပ်အနီး အနက် ၁၈.၅ km (၁၁.၅ mi) တွင်ဖြစ်သည်။ ယင်းငလျင်ကြောင့် လူပေါင်း ၈၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂,၀၀၀ ခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
၂ ဘေးသင့်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ
၂.၂ ဧဝရတ်တောင် ရေခဲဆီးနှင်းထုများ တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျခြင်း
၂.၃ လန်တန်တောင်ကြားတွင် ရေခဲဆီးနှင်းထုများ တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျခဲ့ခြင်း
ငလျင်နှင့် နောက်ဆက်တွဲငလျင်လှုပ်မှုများ မြေပုံ
ငလျင်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၅ ရက် နီပေါစံတော်ချိန် ၁၁:၅၆ နာရီ (၆:၁၁:၂၆ UTC) အချိန်တွင် နီပေါနိုင်ငံ လမ်ဂျန်ခရိုင် အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၃၄ km (၂၁ mi) အကွာ၊ မြေအနက် ခန့်မှန်းခြေ ၁၅ km (၉.၃ mi) ကို ဗဟိုပြု၍ ခန့်မှန်း စက္ကန့် နှစ်ဆယ်ကြာ လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘူမိဗေဒ ဆာဗေးအဖွဲ့ (USGS) ၏ မှတ်တမ်းများအရ ကနဦးငလျင်ပြင်းအားပမာဏမှာ ၇.၅ Mw ရှိကာ ၇.၉ Mw အထိတက်သွားပြီး နောက်ဆုံး ၇.၈ Mw ဖြင့် အဆုံးသတ်ကြောင်းသိရသည်။ တရုတ် မြေငလျင်ကွန်ယက်စင်တာ (CENC) မှ ငလျင်ပြင်းအားပမာဏမှာ ၈.၁ Ms ရှိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာန မှ ၀၆:၁၁ UTC နှင့် ၀၆:၄၅ UTC အချိန်များတွင် နီပေါနိုင်ငံ၌ အင်အားပြင်းငလျင်နှစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။ ပထမငလျင်မှာ ၇.၉ ရစ်တာစကေးရှိပြီး နီပေါနိုင်ငံ မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူ၏ အနောက်မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၈၀ ခန့်အကွာ ကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယငလျင်မှာ ၆.၆ ရစ်တာစကေးရှိကာ ငလျင်ဗဟိုမှာ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်အောက် ၁၀ km (၆.၂ mi) အကွာတွင် ဖြစ်သည်။ Bharatpur မြို့မှာ ငလျင်ဗဟိုချက်နှင့် ၅၃ km (၃၃ mi) အကွာတွင် တည်ရှိကာ ငလျင်နှင့် အနီးဆုံး အဓိကမြို့ကြီး ဖြစ်သည်။ ဒုတိယငလျင်သည် မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူ၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၈၁ km (၅၀ mi) အကွာတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ ပြင်းအား ၄.၅ Mw နှင့်အထက် နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ပေါင်း သုံးဆယ့်ငါးခုကျော် ထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ နီပေါစံတော်ချိန် ၁၂:၄၅ (၀၇:၀၉ UTC) အချိန်တွင် ၆.၇ Mw ရှိ နောက်ဆက်တွဲငလျင်ကြီးတစ်ခုမှာ နီပေါနိုင်ငံ Kodari ရွာ၏ တောင်ဘက် ၁၇ km (၁၁ mi) ကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲငလျင်ကြောင့် ဧဝရတ်တောင်ရှိ ဆီးနှင်းရေခဲထုများ တစ်ဟုန်ထိုးလျောကျခဲ့သည်။
နီပေါနိုင်ငံ > ၈,၁၅၆ > ၁၇,၈၆၆ 
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၇၈ ၅၆၀ 
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၂၆ ၃၈၃ 
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ၄ ၂၀၀ 
၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့အထိ ငလျင်ကြောင့် လူပေါင်း ၈,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကာ ဒဏ်ရာရသူဦးရေမှ သေဆုံးသူဦးရေထက် နှစ်ဆကျော်အထိဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Sushil Koirala က သေဆုံးမှုသည် ၁၀,၀၀၀ အထိ ရှိလာနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငလျင်လှုပ်ချိန်တွင် ကျေးလက်ဒေသများရှိ ရွာသူရွာသားများ အလုပ်ဆင်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ကျေးရွာများရှိ လူသေဆုံးမှုများမှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် နည်းပါးနိုင်သည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်ချိန်တွင် နိုင်ငံခြားသား ၂,၀၀၀ ခန့် နီပေါနိုင်ငံတွင်း၌ ရောက်ရှိလည်ပတ်နေခဲ့ကြသည်ဟု ဟိမဝန္တာတိုင်းမ် သတင်းစာမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူပေါင်းရာချီ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း ယူဆထားပြီး လူပေါင်း ၄၅၀,၀၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗီဟာပြည်နယ်တွင် ၅၈ ဦး၊ ဥတ္တရပဒေသပြည်နယ်တွင် ၁၆ ဦး၊ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တွင် ၃ ဦးနှင့် ရာဇဌာန်ပြည်နယ်တွင် ၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၇၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
တိဗက်ဒေသမှ ၂၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၄ ဦးပေျာက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
၄ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
သေဆုံးကြောင်း အကြောင်းကြားမှုမရှိသော်လည်း အချို့မှာ ပေျာက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
ဧဝရတ်တောင် ရေခဲဆီးနှင်းထုများ တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ငလျင်လှုပ်၍ ရေခဲဆီးနှင်းထု တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျလာချိန်တွင် တောင်တက်သမားရာချီ ဧဝရတ်တောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်လျက်ရှိနေကြကြောင်း ယင်းနေရာတွင်ရှိနေခဲ့သော တောင်တက်သမားများအဆိုအရ သိရသည်။ ရေခဲဆီးနှင်းထု တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျလာမှုကြောင့် ဧဝရတ်တောင် တောင်ဘက်အခြေစိုက်စခန်းရှိ လူများ သေဆုံးခဲ့သည်။ လူ ၁၉ ဦး၏ ရုပ်အလောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အခြေစိုက်စခန်းတွင် သောင်တင်နေသူ တောင်တက်သမား အနည်းဆုံး ၆၁ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယ စစ်တပ် တောင်တက်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သေဆုံးသူများထဲတွင် ဂူဂယ်၏ အလုပ်အမှုဆောင် ဒန်ဖရက်ဒင်ဘာ့ လည်းပါဝင်ကာ ငလျင်လှုပ်ချိန်က သူသည် အနာဂတ် ဂူဂယ်ကမ္ဘာမြေပရောဂျက်အတွက် အခြားသုံးယောက်နှင့်အတူ တောင်တက်နေစဉ်တွင် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငလျင်လှုပ်ချိန်တွင် လူပေါင်း ၇၀၀ မှ ၁၀၀၀ ကျော်အထိ တောင်ပေါ်တွင် ရှိနေလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကာ အနည်းဆုံး ၆၁ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး၊ လူဒါဇင်များစွာ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိပြီး၊ တောင်အမြင့်စခန်းနေရာများတွင် ပိတ်မိနေသူများလည်း ရှိသည်။ ဧဝရတ်တောင်မှာ ငလျင်ဗဟိုချက်၏ အရှေ့ဘက် ၂၂၀ ကီလိုမီတာ (၁၄၀ မိုင်) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။
အိန္ဒိယလေတပ်၏ ရဟတ်ယာဉ်များမှာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဧဝရတ်တောင်သို့ ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၂ ဦးကို ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် Pheriche ရွာသို့ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးမှုကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ မရပ်တန့်မီ အချိန်အထိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ Pheriche ရွာမှာ တောင်တက်သမားများအတွက် အရေးကြီးသော ရပ်နားရာနေရာဖြစ်ကာ၊ ဒေသခံများနှင့် နိုင်ငံခြား စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ တာဝန်ယူကုသပေးနေသည့် ဆေးရုံအမည်ခံနေရာလည်းဖြစ်သည်။
လန်တန်တောင်ကြားတွင် ရေခဲဆီးနှင်းထုများ တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျခဲ့ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
လန်တန် အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင်းရှိ လန်တန်တောင်ကြားဒေသတွင် လန်တန်ကျေးရွာနှင့် ဂိုဒါတာဘဲလာကျေးရွာတို့ကို ရေခဲဆီးနှင်းထုများ တစ်ဟုန်ထိုးပြိုကျခဲ့ပြီးနောက် လူပေါင်း ၂၅၀ ခန့်ပေျာက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဂိုဒါတာဘဲလာကျေးရွာမှာ လန်တန် တောင်တက်လမ်းပေါ်ရှိ နာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြိုကျခဲ့သည့် ရေခဲဆီးနှင်းထုကြီးမှာ ခန့်မှန်းခြေ ၂ မှ ၃ ကီလိုမီတာခန့် အကျယ်ရှိသည်။ လန်တန်ရှိ ဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင် လူ ၃၀၀ ခန့် သေဆုံးကာ ငလျင်လှုပ်ချိန်တွင် တပါတည်းမြှုပ်နှံခံခဲ့ရသည်။ ဒေသခံ ၁၂ ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား ၂ ဦး အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားသား ၇ ဦးအပါအဝင် ရုပ်အလောင်း ၅၂ ခုကို လန်တန်ဒေသတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ခတ္တမန္ဒူမြို့ပြင်ရှိ ထရစ်ဘူဗန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ငလျင်လှုပ်ပြီးပြီးချင်း ပိတ်ထားခဲ့သော်လည်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ယင်းရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်ခဲ့ပြီး ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လေကြောင်းလိုင်းများ ပြန်လည်ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားသည်။
ငလျင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ဒါရာဟာရ မျှော်စင်
ငလျင်မလှုပ်မီအချိန်က ခတ္တမန္ဒူ ဒါဘာစကွဲ
ငလျင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အအုံများ
ခတ္တမန္ဒူ ဒါဘာစကွဲရှိ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော အဆောက်အအုံများပြိုကျခဲ့ရာ ၁၈၃၂ ခုနှစ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ဒါရာဟာရ မျှော်စင်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးလူပေါင်း ၁၈၀ ခန့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဂေါ်ရခါးခရိုင်ရှိ မနကမနဘုရားကျောင်းလည်း ပျက်စီးခဲ့သည်။ ဂျနာကီမန်ဒါဘုရားကျောင်း၏ မြောက်ဘက်ခြမ်း ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ Kasthamandap၊ Panchtale ဘုရားကျောင်း၊ ကိုးထပ်အမြင့်ရှိ Basantapur Durbar၊ Dasa Avtar ဘုရားကျောင်း၊ Krishna Mandir အစရှိသည့် ဘုရားကျောင်းများစွာ ငလျင်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သည်။ ဒါဘာအထက်တန်းကျောင်းလည်း ပျက်စီးခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ M7.8 – 29 km ESE of Lamjung, Nepal။ United States Geological Survey (25 April 2015)။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ USGS။ M6.6 - 49km E of Lamjung, Nepal။ United States Geological Survey။
↑ ၃.၀ ၃.၁ M 6.7 - 21km SSE of Kodari, Nepal
↑ Nepal Disaster Risk Reduction Portal။ drrportal.gov.np။
↑ Nepal earthquake death toll rises to 8,413။ The Times of India (May 7, 2015)။ 10 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 9, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gorkha Earthquake is followed by 125 numbers of Earthquakes။ Nepal Seismological Centre (25 April 2015)။3May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Is this the 'Big Himalayan Quake' we feared?"၊ The Times of India၊ 26 April 2015။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ What 1934 Told Nepal to Expect About the Next Big Quake။
↑ Timeline: Nepal 2015 to 1934, the worst quake disasters in the last 80 years။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nepal earthquake: Eerie reminder of 1934 tragedy။
↑ Earthquake in Nepal 2015။
↑ "First survivors of Mount Everest avalanche reach Kathmandu"၊ Fox News၊ 26 April 2015။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ "Langtang is gone"၊ Nepali Times၊ 1 May 2015။2May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ "Up to 250 missing after avalanche hits Nepal trekking route"၊ "Mail Online"။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "He Carried His Mom On His Back For5Hours En Route To Medical Care"၊ Montana Public Radio၊ 30 April 2015။2May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Great Earthquake wipes out Barpak"၊ The Kathmandu Post၊ 29 April 2015။2May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4May 2015။
↑ Experts had warned for decades that Nepal was vulnerable toakiller quake။ Washington Post။ 29 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Colin Stark။ "Nepal earthquake: 'A tragedy waiting to happen' - CNN.com"၊ CNN၊ 26 April 2015။ 29 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Earth Quake-hit Nepal at high risk of landslides in coming weeks။
↑ Earthquake Again in Nepal 12 May 2015။
↑ Greg Botelho။ "Dozens dead after another major earthquake centered in Nepal"၊ CNN၊ 13 May 2015။ 13 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ Powerful earthquake hits Nepal။ Al Jazeera။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 1 Day, Magnitude 2.5+ Worldwide။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Nepal hit by major aftershock as search for quake survivors intensifies"၊ USA Today၊ 26 April 2015။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Fresh Tremors in North India, Including Delhi,aDay After Nepal Earthquake"၊ NDTV၊ 26 April 2015။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Major aftershock hits Nepal day after devastating earthquake"၊ CNN၊ 26 April 2015။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၉.၀ ၂၉.၁ Nepal PM faces ire of quake victims, The Hindu, April 29, 2015
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ "National Emergency Operation Centre"၊ National Emergency Operation Centre (Nepal Govt.) on Twitter၊3May 2015။3May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Quake toll in India now 78 (29 April 2015)။4May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ 25 dead, 383 injured in Tibet following Nepal earthquake။ Xinhua (28 April 2015)။5May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၃.၀ ၃၃.၁ "4 killed, 18 Bangladesh districts affected in earthquake, says govt"၊ Bdnews24.com။ 26 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "40-indian-nationals-confirmed-dead-in-nepalearthquake-8-are-missing"။4May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 December 2018။
↑ "Nepal earthquake: International aid effort increased"၊ BBC News၊ 27 April 2015။ 27 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "España concluye el rescate en Nepal al dar por muertosalos desaparecidos" (in Spanish)၊ El País၊9May 2015။ 12 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Getik၊ Demid။ Foreigner victims Detail of Earthquake။ Nepal Police။ 26 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-05-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zwei weitere Deutsche nach Erdbeben in Nepal gestorben, nsgesamt geben die nepalesischen Behörden die Zahl der toten Deutschen nun mit vier an။ berlinerkurier.de။ 2015-05-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ terremoto Nepal။ Emergenza24။ 27 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The fourth American confirmed to have died was Vinh B Truong, who had been enjoyingahiking holiday when the tragedy happened; death toll soars past 5,000"၊ Daily Mail၊ 27 April 2015။ 27 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ St. Albert couple confirmed dead following Nepal earthquake။ CTV Edmonton (2 May 2015)။2May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Russian Diplomats Missing in Nepal Found Dead။ The Moscow Times (8 May 2015)။ 8 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Kashmiri-origin mountaineer Renu Fotedar dies in Everest avalanche"၊ Hindustan Times၊ 28 April 2015။2May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 December 2018။
↑ "Nepal earthquake: Melbourne woman Renu Fotedar killed"၊ The Sydney Morning Herald၊ 27 April 2015။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Teadaolevalt on Nepali maavärinas hukkunud üks Eesti kodanik" (in Estonian)၊ Postimees၊ 26 April 2015။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Earthquake claims life of one Estonian"၊ Postimees။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hong Kong resident confirmed dead in Nepal earthquake as 15 more remain missing"၊ SCMP၊ 28 April 2015။ 29 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ British death in Nepal earthquake confirmed။ BBC News (2015-04-29)။ 2015-05-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Rescue team: Body of missing Israeli found in Nepal"၊ The Times Of Israel၊3May 2015။3May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Nepal earthquake death toll expected to rise sharply - live updates"၊ The Guardian၊ 27 April 2015။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Desiree Tresa Gasper (8 May 2015)။ Body confirmed to be Malaysian in Nepal earthquake။ The Star/Asia News Network။ AsiaOne။ 19 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ One Kiwi dead after Nepal earthquake။ Stuff.co.nz (28 April 2015)။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Nepal earthquake: British gap year student confirmed dead"၊ BBC News၊9May 2015။ 10 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jason Burke and Ishwar Rauniyar in Kathmandu။ Nepal earthquake death toll exceeds 6,000 with thousands unaccounted for | World news။ The Guardian။ 2015-05-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ LIVE Nepal Earthquake Update: Death Toll Crosses 5000, Over 5600 Indians Evacuated။ 29 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "90 Britons missing as Nepal earthquake death toll rises"၊ The Himalayan Times via RT၊ 27 April 2015။ 27 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Earthquake Devastates Nepal, Killing More Than 1,900။ NY Times (April 26, 2015)။ April 26, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၉.၀ ၅၉.၁ Gopal Sharma။ "Seventeen bodies found at Everest base camp: Official"၊ The Toronto Sun၊ April 25, 2015။
↑ ၆၀.၀ ၆၀.၁ "Deadly Everest avalanche triggered by Nepal earthquake"၊ The Guardian၊ 25 April 2015။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Extent of the Damage From the Nepal Earthquake။ NY Times (April 26, 2015)။ April 26, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'Huge disaster': Hikers around Everest run for lives, treat injured။ CNN။
↑ Nepal earthquake: Over 1,900 dead as search for survivors continues။ iTV.com။
↑ Indian Army's expedition team rescues 61 climbers from Mount Everest။ DNA India။
↑ Conor Dougherty။ "‘Google Adventurer’ Dies on Mt. Everest"၊ New York Times၊ April 25, 2015။ April 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gregory Korte and Aamer Madhani။ "Mount Everest avalanche survivor: 'I had to survive'"၊ USA Today၊ April 26, 2015။ April 26, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Avalanche sweeps Everest base camp, killing 17, injuring 61 Archived 30 April 2015 at the Wayback Machine., AP, TIM SULLIVAN and BINAJ GURUBACHARYA, April 25, 2015
↑ Peter Holley။ "Massive avalanche slams into Everest base camp following Nepal earthquake"၊ Washington Post၊ April 25, 2015။ April 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Melanie Eversley and Tom Vanden Brook။ "At least 10 dead, others missing as Nepal quake rocks Mount Everest"၊ USA Today၊ April 25, 2015။ April 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Live: First rescue plane lands at Kathmandu airport with 15 injured from Mt. Everest avalanche။ firstpost.com။
↑ Gardiner Harris။ "At Least 10 Everest Climbers Killed as Nepal Quake Sets Off Avalanche"၊ New York Times၊ April 25, 2015။ April 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Daigle၊ Katy (28 April 2015)။ 250 people feared missing after mudslide in Nepal village။ Daily News။ 1 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dr Dave (29 April 2015)။ Landslides in Langtang during and after the Nepal earthquake။ AGU Blogosphere။ 1 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "British archeologist 'terrified' after narrowly escaping death in Nepalese earthquake"။ 28 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dennis၊ Kopp (15 May 2013)။ Langtang Trek – to Langtang Village။ 1 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Landslides in Langtang during and after the Nepal earthquake။ Agence France-Presse (29 April 2015)။ 1 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nepal quake: 52 bodies found in remote valley where trekkers missing။4May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kathmandu airport shut, flights to resume from Sunday။ ABP Live (April 25, 2015)။ April 26, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Historic Tower Collapses In Nepal Earthquake။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "LIVE: Two major quakes rattle Nepal; historic Dharahara Tower collapses, deaths reported in India"၊ Zee News၊ 25 April 2015။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Historic Dharahara tower collapses in Kathmandu after earthquake"၊ 25 April 2015။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 180 bodies retrieved from debris of Nepal's historic tower။
↑ Nearly 700 killed after 7.9-magnitude earthquake strikes Nepal။ RT (25 April 2015)။ 25 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons ရှိ ၂၀၁၅ နီပေါငလျင် နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
National Seismological Center - ငလျင်အတွက် နီပေါတရားဝင်ဝက်ဆိုဒ်
Deadly earthquake Nepal Archived 24 December 2018 at the Wayback Machine. on Earthquake Report Website
ဗွီဒီယို - ငလျင်ကြောင့် ဧဝရတ်တောင် အခြေစိုက်စခန်းအနီး ရေခဲဆီးနှင်းထုပြိုကျလာပုံ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဧပြီ_၂၀၁၅_နီပေါ_ငလျင်&oldid=728237" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။